Fisandohana ny maro anisa eny Tsimbazaza : haongan’ny depioten’ny fanovana ireo namadika palitao | NewsMada
Fisandohana ny maro anisa eny Tsimbazaza : haongan’ny depioten’ny fanovana ireo namadika palitao
Par Taratra sur 29/05/2018
Miditra amin’ny dingana manaraka ary hanilika ireo mitonona ho maro anisa. “Efa vonona ny antontan-taratasinay Tim. Efa vita koa ny an’ny Mapar. Hanatitra fitoriana hanonganana ireo depiote namadika palitao eny amin’ny HCC isika rahampitso (anio). Mipetraha ianareo ary ahorony ny entana rehefa tsy nitory teny Ambohidahy ka nahatonga iny didy iny nivoaka. Tsy ilana olona mpanao kolikoly eny amin’ny Antenimierampirenena”, hoy ny depiote ho an’ny fanovana teny amin’ny kianjan’ny 13 mey, omaly. Momba ny fanoloran’izy ireo ny praiminisitra kosa, nambaran’ny mpandaha-teny fa efa an-dalana izany. Mandinika ambony ambany ary andro aman’alina ny ho lehiben’ny governemanta izy ireo amin’izao fotoana izao. “Horaisintsika am-pifaliana ny praiminisitra sy ny minisitra hapetraka eo. Hiezaka hanao ny mety izahay ary tsy hivaona amin’ny lalana nofaritantsika amin’ny tolona natao”, hoy ihany izy ireo.
Hanao diabe hihazo ny HCC indray ny depiote…
Hanao diabe hihazo ny etsy amin’ny HCC indray izany izao ny vahoaka sy ny depiote ho an’ny fanovana, anio. Nanterin’izy ireo fa voalazan’ny lalàmpanorenana ny ahazoana manongana ireo depiote mpamadika palitao. Miisa 49 ny Mapar ary 21 ny Tim raha ny voka-pifidianana depiote ny taona 2014. Tsy nisy depiote nirotsaka na voafidy amin’ny anaran’ny HVM na iray aza .
Ravana ny Ceni sy ny sefo fokontany…
Ankoatra izany, anisan’ny tsy levon’ny vavonin’ireo depiote 73 ny mbola hitantanan’ny Ceni sy ireo rantsa-mangaika ny fifidianana. “Tsy maintsy ravana io rafitra io. Hatrany amin’ny sefo fokontany, ny lehiben’ny faritra sy ny distrika ary ireo talem-paritra samihafa, miala avokoa satria efa voaporofo ny hala-bato bevata no homanin’izy ireo. Efa vonona any ny voka-pifidianana hampandresy ny HVM…”, hoy ny depioten’ny fanovana.
Nitodika amin’ireo mpiasan’ny minisitera avy eo ny mpandaha-teny ary niantso fahamailoana manoloana ny halatra sy ny fanodinkodinana rehetra any amin’izao fotoana izao.
Halatra any amin’ny minisitera any…
Nohitsin’izy ireo fa tsy mbola vita ny tolona ka miandry ny toromarika rehetra vao miditra miasa sy mamonjy birao. “Henonay fa efa lany aty amin’ny volana jona ny volan’ny soliky ny minisitera sasany raha mbola amin’ny faran’ny taona vao tapitra izany. Misy manoratra ny fiaran’ny minisitera ho azy koa ao amin’ny minisiteran’ny Asa vaventy. Efa mitaona solosaina ny sasany ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazana… Henjehintsika hatramin’ny farany ireny ary tsy maintsy ho hita ny marina”, hoy ihany izy ireo.